ဘီပိုး စီပိုးနှင့် အသည်းရောဂါ ခံစားနေရသူများအတွက် အစွမ်းထက် သခွတ်ပြုတ်ဆေးရည် – Suehninsi
ဘီပိုး စီပိုးနှင့် အသည်းရောဂါ ခံစားနေရသူများအတွက် အစွမ်းထက် သခွတ်ပြုတ်ဆေးရည်
အသည်းရောဂါခံစားနေရသော လူသားများ အတွက် ကျန်းမာလာဘ်တစ်ပါး ဝမ်းမြောက်စေသည့် သခွတ်ပြုတ်ဆေးရည် ..…ဘီပိုး စီပိုး အသည်းသမားများ သခွတ်ကိုသောက် ရောဂါပျောက်၏….( အသည်းရောဂါဖြစ်နေသော မိသားစုဝင်များအား စိတ်ချမ်းသာမှု့ ဖြစ်စေပြီး လူ့သက်တမ်းအပြည့်နေနိုင်သောကြောင့် Mg Mandalay မှ လေးနက်စွာ မျှဝေပါသည် ။ ) အခုဖော်ပြသော သခွတ်အစွမ်းကြောင့်
စီပိုး အသည်းသမားသည် ပိုးကောင်ရေ သိန်းချီရာမှ ဆယ်ဂဏန်းမျှသာကျန်ရှီတော့ပြီး ရောဂါမှာ သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းသွားသလောက်ဖြစ်သွားသောကြောင့် အသည်းအထူးကု ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဝင်း ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်လို့ သခွတ်သောက်သော လူနာကို မှတ်တမ်းအပြု့ခံလိုက်ရသော မြန်မာတို့၏ သခွတ်ပင် သာဖြစ်ပါသည် ။ ဆရာကြီး ထံမှာ
အသည်းအတွက် သောကများစွာ ငွေမြောက်များစွာ ကုန်ကျနေပြီးမှ ရရှိလာသော အစွမ်းထက်ဆေးနည်းလည်း ဖြစ်ပါသည် ထို စီပိုးလူနာ၏ ကိုယ်တွေ့ဆေးဖြစ်သောကြောင့် လူနာကိုယ်တိုင်းမှ ဌင်းကဲ့သို့ ပိုက်ဆံ ရာပေါင်းများစွာ ကုန်ကျခြင်းလည်း မရှိစေဘဲ တကယ်လည်း သောက် တကယ် စီပိုးပျောက်ခဲ့ရလို့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးကုသိုလ် ပြု့နေပါသေးသည် ။
သခွတ်ပင်၏ အပွင့် အရွက် အခေါက် တို့ကို ယူပါ အပွင့်နှင့်အရွက်ကိုတော့ နေအနည်းရသော နေရာမှာ အခြောက်ခံလိုက်ပါ ( လက်ဖက်ခြောက်လို့လည်း သောက်သုံးလို့ရနိုင်စေရန် အတွက် ) အခေါက်ကိုတော့ ရေဆေးပြီး ကြာရှည်သိမ်းထားလို့ရအောင် နေဖန့်ဖန့်ပြပြီး အခေါက်ကို သုံးစွဲ ရပါမည် ။
ပထမဦးစွာ ဆေးကျိုရန်အတွက် မြေအိုးအသစ်တလုံးကို ရယူပါမြေအိုးထဲ့တွင် သခွတ်ပွင့် ၊ အရွက် နှင့် အခေါက်တို့ကို ရေနဲ့ သုံးခွက်တခွက်ကျော်ကျော်လောက် ပြုတ်ပြီး သောက်သုံးပေးပါ တနေ့ကို သုံးကြိမ်( သို့ ) နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ဆောင်သောက်သုံးပေးပါ ။ အခေါက်တစ်မျိုးတည်းကိုလည်း
ကြိုချက်သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။ အရွက်အခြောက်နှင့် အပွင့်အခြောက်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း သောက်သုံးလည်း ရပါသည် ။ အရွက်ခြောက်နဲ့ အပွင့် ခြောက်အနည်းငယ်ကိုလည်း လက်ခြောက်ပုံစံပြုလုပ်ပြီးတော့လည်း ဆေးအဖြစ်သောက်သုံးနိုင်ပါသေးသည် ၊ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်သည့် ပုံစံလို လက်ဖက်ခြောက်အစား သခွတ်အရွက်ခြောက်နှင့်
အပွင့်ခြောက် အနည်းငယ်ထည့်ခပ် ရေနွေးကြမ်း သောက်သုံးသလို့လည်း လုပ်သောက်ခြင်းဖြင့် အသည်းရောဂါအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည် ၊သခွတ်ဆေးရည် သည် အသည်းနဲ့ပတ်သက်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် ဘီပိုး စီပိုး အသည်းရောဂါ ဖြစ်နေသူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးစွမ်းထက်မြတ်ပေးစွမ်းနိုင်သော သခွတ်ပင်၏ ကျေးဇူးများသာ ဖြစ်ပါတော့သည် ။
ဒါကတော့ တကယ့်ဇတ်လမ်းလေး – ကိုအောင်ရင် နဲ့မငွေကြည် တို့လင်မယား ဟာ အသက် ၆၀ ကျော်ပါပြီ ။ ဒီအသက်အရွယ် ရောက်မှ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ ထဖြစ်ကာ ရောဂါ ဝေဒနာ အသည်းအသန် ခံစားရပါတယ် ။ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာ သူများ ဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းပေ့
ဆိုတဲ့ ဆေးခန်း များ မှာ ပြ ပါတယ် ။ မထူးခြား မသက်သာ ပါဘူး ။ ဒါနဲ့မြန်မာ ပြည်က ဆရာဝန်တွေ ပဲ မတတ်နိုင်လို့လားဆိုပြီး စင်ကာပူ နိုင်ငံ အထိ သွားရောက် ကုသ ပါတယ် ။ သို့ပေမယ့်လည်း မသက်သာ မထူးခြားပါဘူး ။ ဒါနဲ့ဗမာပြည်ကို ပြန်လာ ပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတုန်း အသိမိတ်ဆွေ များရဲ့လမ်းညွှန်မှု နဲ့သခွပ်ရွက် အညွှန့်ကလေး တွေ ကို ကျိုသောက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သခွပ်ပင်မတွေ့လို့ဆိုပြီး
ရှားရှားပါးပါး လမ်းမကြီးဘေးမှာ ပေါက်နေတဲ့ သခွပ် ပင် ပေါ်က အရွက်တက်ခူးတဲ့တပည့်များတောင် စည်ပင် နဲ့ပြဿနာ တက်လို့ရှင်းပြ ရပါသေးတယ် ။ အဲဒီမှာ ဗျာ နေ့စဉ် မှန်မှန်သောက်သုံးပေးရာ အချိန်အားဖြင့် ၂ လ လောက် အကြာ မှာ လင်မယား ၂ ယောက်လုံးခံစားနေရတဲ့အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါဆိုးဟာ ပိန်းကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်သကဲ့သို့အရှင်းပျောက်ကင်း သွားပါတယ် ဗျာ။
အခုဆိုရင် လင်မယား ၂ ယောက်လုံး ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့သာရေးနာရေး တွေ မှာ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားနေကြပါပြီ ။ နောက်တစ်ယောက် က တော့ ကိုလင်း တဲ့။ သူ ကတော့ အရက်သမား ။ အရက်ကို အမြဲလို နှစ်ခြိုက်စွာ သောက်သုံး ခဲ့ရာ အသက် ၅၀ ကျော် အရွယ်မှာ အသည်းကြီး
လာပါတယ် ။ အသည်းက အလုပ်ကောင်းကောင်း မလုပ်တော့ဘူး လို့ဆရာဝန်များ က ပြောပါတယ် ။ သက်တမ်း မကျန်တော့ဘူး ပေါ့ဗျာ ။ ဒါနဲ့ကိုလင်း လည်း သေမယ့်သေ ရွာမှာ ပြန်သေမယ် ဆိုပြီး ရွာကို ပြန်ပါတယ် ။ ရွာကြတော့ သခွပ်ညွှန့်အကြောင်း ကြားလိုက်တယ် ။ ဒါနဲ့သခွပ်ညွှန့်လေးတွေ လက်တစ်ဆုတ်
ကို ရေ ၃ လီတာ နဲ့ကျိုတယ် ။ ၁ လီတာ လောက် အကျန် ကြ စသောက်တယ် တစ်နေကုန် အဲဒီ တစ်လီတာ ကို ၃ ခါ ခွဲ ပြီး သောက်တယ် ။ ဒီလို နဲ့၃ လ အကြာ မှာ အသည်းကြီး လို့ဗိုက်ကြီး ပူနေတဲ့ ကိုလင်း ဟာ ဗိုက်လေး ချပ်သွားတယ် ။ အသားအရေလည်း ပြန်လည်စိုပြေ သွားတယ် ။ သို့သော် မိုက်တွင်းက မတက်နိုင်သူ ကိုလင်း ဟာ အခုဆို အရက်ကို ပြန်သောက်နေတယ် ။
ဆေးကျိုသောက်တာ ကို တော့ တစ်လ ကို ၂ ခါ လောက်ပဲ သောက်တော့တယ် တဲ့ ။ပြောချင်တာကတော့ သခွပ်ရွက် သခွပ် အညွှန့်လေး တွေ ရဲ့အစွမ်းသတ္တိပါ ဗျာ ။ ကျွန်တော် တို့မန်းဂေဇက် က စာဖတ်သူများလည်း ကြံကြိုက်လို့တိုက်ဆိုင်လို့သုံးစွဲမယ် ဆိုရင် သုံးစွဲနိုင်ပါစေ ဆိုတဲ့စေတနာ
လေး နဲ့ရေးသားတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ။ ဆရာဝန် တစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်တွေ့ဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ် ပြီး မရေးပြ နိုင်တာ နားလည်ပေးကြပါ ။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ရေးခဲ့တဲ့ လူတွေ ဟာ တစ်ကယ် အပြင်မှာ ပျောက်ကင်းခဲ့သူတွေ ပါ ။ အမည်နာမည် လွှဲ ရေးလိုက်ပါတယ် ။
အသညျးရောဂါခံစားနရေသော လူသားမြား အတှကျ ကနျြးမာလာဘျတဈပါး ဝမျးမွောကျစသေညျ့ သခှတျပွုတျဆေးရညျ ..…ဘီပိုး စီပိုး အသညျးသမားမြား သခှတျကိုသောကျ ရောဂါပြောကျ၏….( အသညျးရောဂါဖွဈနသေော မိသားစုဝငျမြားအား စိတျခမျြးသာမှု့ ဖွဈစပွေီး လူ့သကျတမျးအပွညျ့နနေိုငျသောကွောငျ့ Mg Mandalay မှ လေးနကျစှာ မြှဝပေါသညျ ။ ) အခုဖျောပွသော သခှတျအစှမျးကွောငျ့
စီပိုး အသညျးသမားသညျ ပိုးကောငျရေ သိနျးခြီရာမှ ဆယျဂဏနျးမြှသာကနျြရှီတော့ပွီး ရောဂါမှာ သိသိသာသာ ပြောကျကငျးသှားသလောကျဖွဈသှားသောကွောငျ့ အသညျးအထူးကု ဒေါကျတာ ခငျမောငျဝငျး ဆရာကွီးကိုယျတိုငျအံ့အားသငျ့လို့ သခှတျသောကျသော လူနာကို မှတျတမျးအပွု့ခံလိုကျရသော မွနျမာတို့၏ သခှတျပငျ သာဖွဈပါသညျ ။ ဆရာကွီး ထံမှာ
အသညျးအတှကျ သောကမြားစှာ ငှမွေောကျမြားစှာ ကုနျကနြပွေီးမှ ရရှိလာသော အစှမျးထကျဆေးနညျးလညျး ဖွဈပါသညျ ထို စီပိုးလူနာ၏ ကိုယျတှဆေ့ေးဖွဈသောကွောငျ့ လူနာကိုယျတိုငျးမှ ဌငျးကဲ့သို့ ပိုကျဆံ ရာပေါငျးမြားစှာ ကုနျကခြွငျးလညျး မရှိစဘေဲ တကယျလညျး သောကျ တကယျ စီပိုးပြောကျခဲ့ရလို့ သူကိုယျတိုငျလညျး ဆေးကုသိုလျ ပွု့နပေါသေးသညျ ။
သခှတျပငျ၏ အပှငျ့ အရှကျ အခေါကျ တို့ကို ယူပါ အပှငျ့နှငျ့အရှကျကိုတော့ နအေနညျးရသော နရောမှာ အခွောကျခံလိုကျပါ ( လကျဖကျခွောကျလို့လညျး သောကျသုံးလို့ရနိုငျစရေနျ အတှကျ ) အခေါကျကိုတော့ ရဆေေးပွီး ကွာရှညျသိမျးထားလို့ရအောငျ နဖေနျ့ဖနျ့ပွပွီး အခေါကျကို သုံးစှဲ ရပါမညျ ။
ပထမဦးစှာ ဆေးကြိုရနျအတှကျ မွအေိုးအသဈတလုံးကို ရယူပါမွအေိုးထဲ့တှငျ သခှတျပှငျ့ ၊ အရှကျ နှငျ့ အခေါကျတို့ကို ရနေဲ့ သုံးခှကျတခှကျကြျောကြျောလောကျ ပွုတျပွီး သောကျသုံးပေးပါ တနကေို့ သုံးကွိမျ( သို့ ) နှဈကွိမျလောကျ လုပျဆောငျသောကျသုံးပေးပါ ။ အခေါကျတဈမြိုးတညျးကိုလညျး
ကွိုခကျြသောကျသုံးနိုငျပါသညျ ။ အရှကျအခွောကျနှငျ့ အပှငျ့အခွောကျကိုတော့ အောကျဖျောပွပါ အတိုငျး သောကျသုံးလညျး ရပါသညျ ။ အရှကျခွောကျနဲ့ အပှငျ့ ခွောကျအနညျးငယျကိုလညျး လကျခွောကျပုံစံပွုလုပျပွီးတော့လညျး ဆေးအဖွဈသောကျသုံးနိုငျပါသေးသညျ ၊ လကျဖကျခွောကျခပျသညျ့ ပုံစံလို လကျဖကျခွောကျအစား သခှတျအရှကျခွောကျနှငျ့
အပှငျ့ခွောကျ အနညျးငယျထညျ့ခပျ ရနှေေးကွမျး သောကျသုံးသလို့လညျး လုပျသောကျခွငျးဖွငျ့ အသညျးရောဂါအတှကျ ကွိုတငျကာကှယျခွငျး အကြိုးကြေးဇူးရရှိပါသညျ ၊သခှတျဆေးရညျ သညျ အသညျးနဲ့ပတျသကျသော အသညျးအဆီဖုံးခွငျးနှငျ့ ဘီပိုး စီပိုး အသညျးရောဂါ ဖွဈနသေူမြား အတှကျ အကောငျးဆုံး ဆေးစှမျးထကျမွတျပေးစှမျးနိုငျသော သခှတျပငျ၏ ကြေးဇူးမြားသာ ဖွဈပါတော့သညျ ။
ဒါကတော့ တကယျ့ဇတျလမျးလေး – ကိုအောငျရငျ နဲ့မငှကွေညျ တို့လငျမယား ဟာ အသကျ ၆၀ ကြျောပါပွီ ။ ဒီအသကျအရှယျ ရောကျမှ လငျမယား နှဈယောကျစလုံး အသညျးရောငျ အသားဝါ ဘီ ထဖွဈကာ ရောဂါ ဝဒေနာ အသညျးအသနျ ခံစားရပါတယျ ။ ပိုကျဆံ ခမျြးသာ သူမြား ဖွဈတာကွောငျ့ ကောငျးပေ့
ဆိုတဲ့ ဆေးခနျး မြား မှာ ပွ ပါတယျ ။ မထူးခွား မသကျသာ ပါဘူး ။ ဒါနဲ့မွနျမာ ပွညျက ဆရာဝနျတှေ ပဲ မတတျနိုငျလို့လားဆိုပွီး စငျကာပူ နိုငျငံ အထိ သှားရောကျ ကုသ ပါတယျ ။ သို့ပမေယျ့လညျး မသကျသာ မထူးခွားပါဘူး ။ ဒါနဲ့ဗမာပွညျကို ပွနျလာ ပွီး ဘာလုပျရမှနျးမသိ ဖွဈနတေုနျး အသိမိတျဆှေ မြားရဲ့လမျးညှနျမှု နဲ့သခှပျရှကျ အညှနျ့ကလေး တှေ ကို ကြိုသောကျပါတယျ။ အဲဒီမှာ သခှပျပငျမတှလေို့ဆိုပွီး
ရှားရှားပါးပါး လမျးမကွီးဘေးမှာ ပေါကျနတေဲ့ သခှပျ ပငျ ပျေါက အရှကျတကျခူးတဲ့တပညျ့မြားတောငျ စညျပငျ နဲ့ပွဿနာ တကျလို့ရှငျးပွ ရပါသေးတယျ ။ အဲဒီမှာ ဗြာ နစေ့ဉျ မှနျမှနျသောကျသုံးပေးရာ အခြိနျအားဖွငျ့ ၂ လ လောကျ အကွာ မှာ လငျမယား ၂ ယောကျလုံးခံစားနရေတဲ့အသညျးရောငျ အသားဝါ ရောဂါဆိုးဟာ ပိနျးကွာရှကျပျေါရမေတငျသကဲ့သို့အရှငျးပြောကျကငျး သှားပါတယျ ဗြာ။
အခုဆိုရငျ လငျမယား ၂ ယောကျလုံး ကနျြးကနျြးမာမာ နဲ့သာရေးနာရေး တှေ မှာ တကျတကျကွှကွှ လှုပျရှားနကွေပါပွီ ။ နောကျတဈယောကျ က တော့ ကိုလငျး တဲ့။ သူ ကတော့ အရကျသမား ။ အရကျကို အမွဲလို နှဈခွိုကျစှာ သောကျသုံး ခဲ့ရာ အသကျ ၅၀ ကြျော အရှယျမှာ အသညျးကွီး
လာပါတယျ ။ အသညျးက အလုပျကောငျးကောငျး မလုပျတော့ဘူး လို့ဆရာဝနျမြား က ပွောပါတယျ ။ သကျတမျး မကနျြတော့ဘူး ပေါ့ဗြာ ။ ဒါနဲ့ကိုလငျး လညျး သမေယျ့သေ ရှာမှာ ပွနျသမေယျ ဆိုပွီး ရှာကို ပွနျပါတယျ ။ ရှာကွတော့ သခှပျညှနျ့အကွောငျး ကွားလိုကျတယျ ။ ဒါနဲ့သခှပျညှနျ့လေးတှေ လကျတဈဆုတျ
ကို ရေ ၃ လီတာ နဲ့ကြိုတယျ ။ ၁ လီတာ လောကျ အကနျြ ကွ စသောကျတယျ တဈနကေုနျ အဲဒီ တဈလီတာ ကို ၃ ခါ ခှဲ ပွီး သောကျတယျ ။ ဒီလို နဲ့၃ လ အကွာ မှာ အသညျးကွီး လို့ဗိုကျကွီး ပူနတေဲ့ ကိုလငျး ဟာ ဗိုကျလေး ခပျြသှားတယျ ။ အသားအရလေညျး ပွနျလညျစိုပွေ သှားတယျ ။ သို့သျော မိုကျတှငျးက မတကျနိုငျသူ ကိုလငျး ဟာ အခုဆို အရကျကို ပွနျသောကျနတေယျ ။
ဆေးကြိုသောကျတာ ကို တော့ တဈလ ကို ၂ ခါ လောကျပဲ သောကျတော့တယျ တဲ့ ။ပွောခငျြတာကတော့ သခှပျရှကျ သခှပျ အညှနျ့လေး တှေ ရဲ့အစှမျးသတ်တိပါ ဗြာ ။ ကြှနျတျော တို့မနျးဂဇေကျ က စာဖတျသူမြားလညျး ကွံကွိုကျလို့တိုကျဆိုငျလို့သုံးစှဲမယျ ဆိုရငျ သုံးစှဲနိုငျပါစေ ဆိုတဲ့စတေနာ
လေး နဲ့ရေးသားတငျဆကျလိုကျပါတယျ ။ ဆရာဝနျ တဈယောကျ မဟုတျတဲ့အတှကျ လကျတှဓေ့ါတျခှဲ စမျးသပျ ပွီး မရေးပွ နိုငျတာ နားလညျပေးကွပါ ။ အပျေါမှာ ကြှနျတျော ရေးခဲ့တဲ့ လူတှေ ဟာ တဈကယျ အပွငျမှာ ပြောကျကငျးခဲ့သူတှေ ပါ ။ အမညျနာမညျ လှဲ ရေးလိုကျပါတယျ ။
Source : Mg Mandalay
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာမအီးတီရဲ့ မွေးနေ့အတွက် ရည်စူးပြီး အလှူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စည်ဖြိုး
ဆယ်တန်းမအောင်ပေမယ့်လဲ မိသားစုကို ရှာကျွေးနိုင်လို့ ဂုဏ်ယူကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီ
တစ်ခါတစ်ရံမှသာ ချစ်သမီးလေးတွေနဲ့ အတူနေခွင့်ရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းခံစားနေရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါက်
ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ စောင်မပါဘဲ ပုဆိုးခြုံအိပ်နေရတဲ့ အဘိုးကိုတွေ့ခဲ့လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းအုန်းနဲ့စောင်တွေ လုံလုံလောက်လောက် လှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ